Kogeelay: ipod/phone:Let's use as webcam
Download Myanmar3 fonts if you don't have one
ipod/phone:Let's use as webcam
ipod သို့မဟုတ် iphone မှာ ကွန်ပြူတာ တစ်လုံးနဲ့ webcam တတ်ထားသလို ထိုင်ကြည့်နေချင်သလား? အဲလိုဆိုလည်း ရပါတယ်၊ သို့မဟုတ် oovoo ပြောဖို့ webcam မရှိဘူးလား? ipod / iphone ကို webcam အနေဖြင့် အသုံးပြုမလား? အဲလိုဆိုလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ mobile တွေနဲ့ပတ်သပ် ပြီးကြွမ်းကြွမ်း ကျင်ကျင်မရှိတော့ အဲ့ဒီ အကြောင်းတွေကို ပိုစ့်တင်ဖို့ကလည်း အမတန် ခဲရင်းပါတယ်။ သိသလောက် တတ်သလောက်လည်း ပြန်ှမျှဝေချင်ပါ တယ်။ ဒီဆော့ဝဲလေးကို ရှာတွေ့တာ သိပ်မကြာသေးပါဘူူး... တော်တော်မိုက်လို့လည်း ပြန်တင်လိုက်တာပါ။ စမ်းကြည့် ချင်သူများလည်း ပြန်ပြီးလက်တွေ့ စမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဆက်လက်သာ ဖတ်ရှု့ပေတော့ဗျာ။
အဆိုပါ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံမှာ ပထမဦးဆုံး ipod/phone နဲ့အင်စတောလုပ် ပုံပြထားပါတယ်။ App store မှာသွားပြီး epoccam ဆိုတာကို နှိပ်ထည့်ပြီး ရှာလိုက်ပါ။ App နှစ်ခုပေါ်ခဲ့ရင်တော့ Epoccam freeversion ကိုပဲအင်စတော လုပ်ပေး လိုက်ပါ။ အခုက ipod/phone ကိုအခြေခံပြီး ရှင်းပြပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Window phone ကော Android phone မှာကော သုံးလို့ရတယ် ဆိုတာ ပြောချင်ပါတယ်။ ပြီးပြီဆိုလျှင် ဒုတိယ အနေနဲ့ ကွန်ပြူတာထဲမှာ သူ့ရဲ့ program ကိုအင် စတောလုပ် ပေးရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီဆော့ဝဲကိုဒေါင်း လော့လုပ်ဖို့ ဒီမှာနှိပ် ပါ၊ mac အတွက်ဆိုရင် ဒီမှာနှိပ် ပါခင်ဗျာ။
အင်စတော အားလုံး လုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့ သုံးပုံသုံးနည်းပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ အသုံးပြုနည်းက လွယ်ပါတယ်၊ ပထမဦး ဆုံး computer မှာအင်စတောလုပ် ထားတဲ့ EpocCam ကိုဖွင့်ပါ၊ computer signal ပုံလေးပေါ်နေပြီး ဆိုရင် mobile ပေါ်က အင်စတောလုပ်ထားတဲ့ epoccam app ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။ ခဏလေးစောင့်နေလျှင်တော့ ကွန်ပြူတာနဲ့ mobile device က connect ဖြစ်သွားပြီး ကွန်ပြူတာပေါ်သို့ Moblie ရဲ့ cramera မှာမြင်တာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကယ်..mobile အားလုံးနီးပါး အလုပ်လုပ်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေး ရေးပေးသွားဖို့တော့ မမေ့ပါနဲ့.. ဒီမှာက ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ ဘလော့ရေးနေရ တာ...စာနာနားလည်ရင်တော့ ရေးခဲ့ပေါ့ း)
သတိးထိုနည်းလမ်းသည် internet connection တစ်ခုတည်းတွင်သာ အလုပ်လုပ်ပါသည်၊ ကွန်ပြူတာသည် တစ်ခြား connection ဖမ်း၍ mobile device သည်အခြား connection ဖမ်းပြီး မသုံးဆောင်နိုင်ပါ။
Notice: Your computer and mobile must be in the same connection, otherwise it will not work!